တော်လှန်‌ရေးကာလ အသက်ကယ်နည်းများ… – PVTV Myanmar
·9months ago ·12 Comments
(၃) နားပိတ် ပတ်တီးစည်းနည်း
Like – 3.5K Share – 447
2021-04-25 at 11:40 AM
တိုက်ဖို့ လက်နက်တွေ ဝယ်ပေးတာတွေပဲ လုပ်ပေးပါ။
2021-04-25 at 11:57 AM
I get knowledge
2021-04-25 at 12:47 PM
Mee Pone says:
2021-04-25 at 12:51 PM
2021-04-25 at 12:55 PM
ခေတ် သစ် says:
2021-04-25 at 2:06 PM
အခြေမခိုင်တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတစ်ချို့အငတ်ဘေးကြုံတောမှာမို့သို့လောသို့လောတွေဖြစ်လာကြပြီနော်။
2021-04-25 at 2:22 PM
Thanks. for your valuable knowledge sharing.
2021-04-25 at 3:02 PM
2021-04-25 at 3:09 PM
အာဏာရွင္ကို စစ္ေရးအရ ဆိုက္ကို တိုက္ရပါမယ္ ျပည္သူလူထု သေဘာဆနၵအရ စစ္ေရးအရ မင္းေအာင္လွိဳင္ကို စစ္ေရးအရ တိုက္ဖို႔ပဲ
2021-04-25 at 3:45 PM
crd Soe Paing Oo
Reta Bsn says:
2021-04-25 at 7:06 PM